Ndụmọdụ gbasara ihe ị ga - eme na Barcelona - 1aviagem.com
Gara aga post: ụtụ maka Notre-Dame
Nzipu ozo: Agba nke Asaa
Edebere 30 July 2019 site Römulo Lucena
Barcelona dị mma maka ndị na-amasịkarị ụkpụrụ ụlọ.
Facade na n'ime ime nlele ndị edepụtara n'okpuru na-ewetara onye ọbịa ọ bụla ihe pụrụ iche na nke square.
Ọ bụrụ na nke a bụ njem mbụ gị na Barcelona soro ndụmọdụ ndị a:
Ihe mbu ị ga - achọpụta bụ na na Barcelona ha anaghị asụ Spanish, Catalan bụ asụsụ gọọmentị ha.
Kechioma diri ndi mara Portuguese, nihi na ihe iriba ama na uzo ndi ozo yiri ya na ndi Portuguese ma oburu na imara na ndi Portuguese ga enwe nfufu ighota, odi kariri asusu French.
N'otu aka ahụ ọ bụrụ na ị maara Spanish, ị ga-enwekwa ahụtụ ike na Catalan. Ka emechara asụsụ niile yiri ka ọ bụ ụdị Castilian dị iche iche.
Ọdụ ụgbọ elu 2- El Prat
Ọ bụrụ na i ji ụgbọ elu si ọdụ ụgbọ elu El Prat bịa hụ ọdụ ụgbọ elu ị gbagara na ya, enwere ọdụ 2, na bọs na-acha akwụkwọ ndụ na-ejikọ abụọ ahụ n'efu, ihe dị ka nkeji 15 site n'otu ọdụ gaa na nke ọzọ. Ebe a na-eburu bọs ahụ dị iche dabere na ntụzi aka. Otu na-abanye n'ime ala, ebe onye ọzọ na-agbadata n'okpuru, ọ bụ ihe ịtụnanya iji onye ọrụ nchekwa kwenye ozi ahụ ma ọ bụrụ na enwe obi abụọ ebe ịnọ. Busgbọ ala nke na-apụ site na ọdụ ụgbọ ala na-aga n'obodo ahụ, ọ ga - ekwe omume ka ị bịarute wee gaa ozugbo ịme ihe ahụ, ya bụ, gaa etiti obodo, ị nwere ike ịzụta tiketi ụgbọ ala ga-eduga gị n'etiti obodo ahụ n'onwe ya. Gbọ elu Straightga ozugbo na Ime Anwansi dabere na oge, ọ bara ezigbo uru.
3- Isi iyi Ime Anwansi
Isi iyi Ime Anwansi dị na Montjuïc, ma ọ bụrụ na ị rute nrị ụtụtụ Ulo elu Barcelona nwere ugbo ala nke gha enweta gi Ọ na-ewe gị gafee, ọ ga-aba uru ma ị hụ ihe ngosi ọkụ na egwu dị na saịtị. Ha dị ebube na ikuku dị egwu. Ihe ị ga-eme bụ ibido obere n’oge wee chọta ebe dị mma ịnọ. InfeDịka ọ bụla n’etiti ndị njem nleta, anyị ga-akpachara anya maka na enwere akpa ego nke na - eme n'ihi ìgwè mmadụ na ihe na - adọrọ mmasị ebe a na - eme ihe dị mfe. Yabụ, ọ bụrụ n’ị ga-eme dịka akpa anyị si akpa na-abịa ọsọ ọsọ site na bọs ọdụ ụgbọ eluLekọta ihe gị. Họrọ ebe dị nso na mgbidi nke na-enyererịrị aka n'ihe gbasara nchekwa yana ịrịgo na isi iyi egwu. Accessnweta isi mmalite bụ n'efu ma ha na-arụ ọrụ site na Tọzdee ruo Sọnde na 20: 00h (8: 00 pm).
4- Lookout dị nso na Plaça Catalunya.
N'iburu n'uche na ịchọrọ ịhụ ihe ngosi egwu mmiri a na-agba egwu ma ugbua na Plaza de Catalunya nwere nlele anya na echiche kachasị mma nke obodo ahụ nke kwesịrị ịlele, ọbụlagodi ịnwere ike ile ihe ngosi dị iche iche, ogige, ebe na ebe dị iche iche nnukwu ụlọ ebe ahụ.
O nwere igwe bulie nke eboro ya n’elu, nke a na - enyere aka belata onu ogugu ndi mmadu n’elu. May nwere ike ịnọ n ’ihu olulu mmiri a na-ete n’elu. O di nwute na anyi choputara onye nlere anya ma emechaa gaa n ’ubochi anyi rapuru, ma lee etu nche si di oke uru.
5- Pilọ nsọ Mmebi nke Ezinaụlọ
Ma ọ bụ naanị Sagrada Familia Church, nke dị n'akụkụ Gaudí Square ma dị mfe ịchọta maka agba ya.
Arlọ ihe owuwu ya nwetara ọtụtụ mmetụta gụnyere nke Antoni Gaudí. Ejikọtara ụzọ Gothic na onye ọhụụ, ya jiri aka ya mee ya bụ ntụzịaka atọ tinye aka na okike nke otu ebe, na-atụle na Gaudí nwere ụdị nke ya ma chọọ ịrụ ọrụ nke ihe owuwu. Maka nke a, Sagrada Familia bụ ụka kwesịrị ekwesi, na-amalite site na mpụga. Ọ mara mma etu esi nwee nkọwa ya.
You ga - ahụ na o nwere ụlọ elu nke na - akọ ozioma nke ndịozi 4 (Matiu, Mak, Luk, John) na onye ọzọ maka Meri na - amaghị nwoke na otu onye ikpeazụ n'ime ha kacha dee akụkọ banyere Kraịst. Nke ahụ bụ n'ihi na anyị na-ekwu naanị banyere facade.
Maka ego, Gaudí enweghị ike mezue ya, mana o ji ya nwalee maka ihe mejupụtara ngwa ya na ọrụ ndị ọzọ. Kwesịrị nleta.
6- Katidral Gothic nke Barcelona
Ka na-ekwu maka ụka, enwere Katidral Gothic nke Barcelona ebe ị ga - ahụ ili dị iche iche gụnyere ili Santa Eulalia. Ọ bụ ihe itu n'anya na mgbe ochie ndị mmadụ lie n'ụzọ nkịtị n'ime katidral ndị ahụ. Nke a na-eme ka Katidral nwee nnukwu ọrụ, ma ụlọ ụka ma ebe a na-eli ozu. Ikekwe ọ bụ ụzọ isi na-eduzi mkpụrụ obi furu efu, amaghị m nke ọma. Ọ bụrụ na ị maara ahapụ na nkwupụta ihe ị chere banyere ya.
Agbata obi bụ ihe a na-eme n'okporo ụzọ mgbe ochie nke nwere ọtụtụ ebe nkiri, cafes na ụlọ mmanya.
Site n'ụzọ, ọ bụ ihe ịtụnanya iji ọdịiche nke ndị Gothic na ahịrị ya kwụ ọtọ na Gaudí, ya na agba ya gburugburu ma nwee agba.
Ọ dị mma ebe a, m ga - akpọ aha ọtụtụ mana m na - atụ aro ka ịhọrọ ole na ole n'ime ha, ihe kpatara ya bụ na ị ga - enwe obi ụtọ na nke mbụ, kwughachi na nke abụọ na ike gwụrụ nwere ike ịmalite ịkụ obere ihe ileta niile.
8- Nlele Montjuic
Nke mbụ na nke dị mkpa bụ ikiri panoramic nke Montjuic. O nwere igwe mbuli, ya na isi iyi anwansi. Nye m, ọ bụ ihe nkiri kachasị dị egwu banyere Barcelona
9- Nlele si Parc Güell
Obere ihe siri ike irute ebe ahụ, ọ nwere nnukwu ugwu ọ nweghị ugwu, ma ihe nlele ahụ na-akwụ ụgwọ maka ike ọgwụgwụ nke ije ahụ.
10- Nlele nke Aeri del Port ferry
Ọ bụ ụgbọ ala USB na-agafe n’ọdụ ụgbọ mmiri mpaghara Barcelona bara uru nleta. Karịsịa ma ọ bụrụ na ị nọ nso mpaghara ọdụ ụgbọ mmiri
Site na ugbo elu si Puerto.
Casa Batló dị nnọọ iche na ihe ọ bụla ị hụtụrụla, ihe okike ya nwekwara mmetụta nke Gaudí. Mgbe anyị gara, emechiri ya maka mmezigharị ka anyị nwee ike ịhụ naanị ihu ụlọ ahụ.
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-akwado bọọlụ ma dịkwa ka ndị egwuregwu bọọlụ taa, ị ga-aga Camp Nou ebe akpọrọ gị Ebe egwuregwu Barcelona.
N'ebe ahụ, ị ​​nwere ike iso akụkọ ihe mere eme nke klọb wee hụ na ha nwere (ma ka nwere ụfọdụ) kpakpando na otu, ezigbo ìgwè kpakpando dịka Ronaldinho Gaúcho, Leonel Messi na Daniel Alves, Suáres, Neymar Júnior, wdg. (Ọ dị mma, nke ikpeazụ bụ kpakpando na-agba agba) mana ọ ka nwere bọlbụ ya mgbe ọ chọrọ igwu egwu.
Kwesịrị nleta nleta ahụ, foto panoramic, mana ọnụ ahịa ụlọ ahịa bụ nnu nnu, aro a bụ ịmara, ọ bụghị ịzụta.
Ndụmọdụ ndị ọzọ:
11- Kaadị akwụkwọ
Ọ bụrụ na ị bụ nwata akwụkwọ ma nwee obere akpa, were ya na njem gị, a ga-ebelata maka nnabata ọtụtụ ebe ngosi nka na ogige.
12- Chekwa na Mmiri
Mmiri mmiri dị mkpa na njem ọ bụla. Otu isi maka ịchekwa ego na Barcelona bụ iji isi iyi obodo, ee, enwere isi iyi kwesịrị ekwesị ị drinkụ, mgbe ụfọdụ ha bụ ntakịrị ihe zoro ezo, mana enwere. Ha ga - ekwe omume n’enye uto di iche. Ha adịghịkwa ka iyi mmiri, ha bụ obere isi iyi ọ locatedụ drinkingụ ndị dị nso ebe ndị njem. Were otu karama gi ma fanye na isi iyi a, nke a ga - azoputa gi otutu Euro ma mee ka akpiri kporo gi nku mgbe inya.
Ugbu a ị nwere ike ịga njem nleta ị ga - elele: “La ciudad Condal”, (City of the Counts) N'ihi ntinye ọnụ ọgụgụ na nnwere onwe ha na narị afọ nke iri na atọ na nke iri na anọ. Barcelona bụ isi obodo nke alaeze Catalonia na Aragon (Renato Aragon nwere uwe ogwe aka ọ hụrụ?!) Mana taa ọ laghachiri na alaeze nke Spain. Ma enwere mmeghari ohuru iji mee ka Catalonia nwere onwe ya ọzọ. Ọ bụ ma ọ bụrụ na ha nwere ike?
Ihe ncheta ndị ahụ mara mma nke ukwuu, mana ha ka na-egosi akụkụ Spanish ha.
13- Inweta Gburugburu:
Dabere na ebe ị bịarutere na nso ebe ị ga-aga bụ na achọtara m saịtị a nke ahaziri nke ọma ma nwee ọtụtụ njem njem gụnyere ụgbọ mmiri na-apụ na Barcelona.
M na-ahapu ebe a ka uzo a boo boolu ebe o dicha nfe ma di nfe ịhazi njem intaneti na-ahapụ ma obu abia na ebe di iche. Ebe ha lekwasịrị anya bụ Eshia, mana dịka Barcelona nwere, ị nwere ike nweta ọnụahịa dị mma na mberede site na iji njikọ ahụ:
M na-anọ ebe a, nnukwu mmakọ ruo mgbe na-esote Post.
Ọ bụrụ na ị masịrị soro anyị, naanị site na email na bọtịnụ uhie na ihuenyo.
Olee otú Barcelona Batllo Camp Nou Catalonia El prat anwansi iyi Gothic Parc Guell Ezinaụlọ